Ao Manarintsoa Isotry izy ireo no mipetraka. Voatery nivoaka nitety ireo toerana misy mpitandro ny filaminana ireo ray aman-dreniny rehefa tsy tafaverina nandritra ny ora maromaro izy. Sendra ireo tsara sitrapo anefa i Iandraina ka mpanamboatra fiara iray no nanatitra azy tao amin’ny polisy ampitan’ny fokontany ao Manarintsoa Isotry ihany. Ireto farany no nampandre ireo ray aman-dreniny taorian’izay. Raha ny fantatra, somary nisy fifamaliana kely teo amin’i Iandraina sy ny reniny talohan’io tsy nahitana azy io. Efa milamina tanteraka ny raharaha ankehitriny. Efa niverina nianatra i Andraina omaly niatrika ny fanadinana fifindran-kilasy. Tsiahivina fa taona fahavalo ao amina sekoly tsy miankina iray eny Manarintsoa Isotry i Iandraina kely.